Ilay Mpialoha lalana. BNL Ministries - mg08
Ny Mpialoha Lalana.
Jaona dia nandrakitra an-tsoratra ao amin'ny toko 1:19-21 izao lahateny mahaliana manaraka izao, izay nifanaovany tamin’ny mpisorona ny olona sasany:
Ireo mpisorona sy Levita dia nahita fa ny zava-drehetra momba an'i Jaona dia hafa mihintsy- ny fitoriany ny fibebahana, ny fitafiany ny hoditra rameva, ary ny sakafony valala sy tantely remby. Izy ireo nahitsikaritra fa tsy nankany amin'ny Tempoly izy mba hitory, nefa ny asa fanompoany dia tena nahitam-bokatra. Very hevitra ny momba io lehilahy avy an-efitra io ry zareo, dia nitady ny valin’izany izy ireo; noho izany ny fanontaniana dia ny hoe "Ianao ve no Elia?" Ny mpaminany lehibe farany fantatr’ireo olona ireo dia i Malakia, izay efa 400 taona lasa. Ireo mpivavaka ireo dia nahalala tsara ny Malakia 4:5, ary nihevitra izy ireo fa i Jaona dia ny fahatanterahan'ny ampahany amin'io faminaniana io ...
Indro Izaho handefa an’i Elia ilay mpaminany ho aminareo alohan’ny ahatongavan’ilay andron’ny Tompo lehibe sady mampatahotra. Ary izy dia hampitodika ny fon’ny ireo ray ho amin’ny zanaka, ary ny fon’ny zanaka ho amin’ireo rainy, fandrao tonga Aho ka hikapoka ny tany amin’ny ozona.
Fa rehefa nanontaniana raha toa ka izy izany mpaminany izany, dia nambarany mazava tsara fa "Tsia". Dia nieritreritra izy ireo fa mety i Jaona ny fahatanterahan'ny Deoteronomia 18 izay efa nolazain'i Mosesy fa hisy mpaminany "tahaka" ny tenany. Nihalalina ny zava-miafina raha vao namaly tahaka izany i Jaona. Eny ary, i Jaona dia nandà fa tsy ny tenany ilay mpaminany mba "hampody ny zavatra rehetra"; nandà ny maha "mpaminany tahaka an'i Mosesy" ny tenany izy. Iza tokoa ary izy? Nohon’ny tsy fahatakarana ny Soratra Masina dia nanontany azy ny mpitondra fivavahana raha toa ka izy no "ilay voahosotra", ny Mesia?. Tamin’ io fanontaniana io izy dia namaly "eny" sy "tsia", "eny" satria voahosotr'Andriamanitra izy, "tsia"satria tsy izy ilay voahosotra iray. Tamin’ny farany, nohon’ny fahajambany ara-panahy, ny mpisorona sy ny Levita dia nanontany azy: "Iza marina ianao?" Tsy nisalasala i Jaona Mpanao Batisa (ao amin’ny Jaona 1:23) nampahafantatra ny tenany ao amin'ny Soratra Masina, nanondro azy ireo ny faminaniana izay tsy hitandry zareo ao amin'ny Isaia 40:3 ka nanao hoe: «Injany! misy feon'ny miantso hoe: Manamboara lalana any an-efitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any an-tany foana ho an'Andriamanitsika.»
Nanambara ny tenany ve i Jaona? Tsia. Jaona nanambara ny Soratra Masina ary ny Soratra Masina no nanambara azy. Izy no tena fahatanterahan’io Soratra Masina io.
Ary hoy Isaia: (Isaia 40:3) fa hisy iray ho avy tahaka ny feo miantsoantso any an-efitra. Jaona Mpanao Batisa izany feo izany "feo.", Malakia 3:1 koa dia manambara izany.
Indro, haniraka ny irako Aho, ary izy hanamboatra lalana eo alohako; ary ny Tompo Izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempoliny; ary ny Anjelin'ny fanekena Izay irinareo, dia, indro, tamy Izy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.
Averina indray ary fa i Jaona Mpanao-batisa izany dia iraka nirahina mialoha, alohan’ny nahatongavan’ny Tompo tampoka ho eo an-tempoliny. Jaona, araka ny Soratra Masina dia nahalala hoe iza izy (tenany) ary inona no asa hataony? Fa isika ve nahalala hoe iza izy?
Ankehitriny, andeha ary hojerentsika ny fomba namaritan’i Jesosy an’i Jaona Mpanao Batisa. Ao amin'ny nanambaràny ny Tenany ho toy ny Zanak'olona, dia nametraka ihany koa fa ny asa fanompoana izay ataon’i Jaona dia ao amin'ny Teny. Matio 17:9-13 dia mirakitra ny resaka nifanaovan’i Jesosy tamin'ny mpianany momba ny asa ataon’ny Elia voalaza ao amin’ny faminaniana Malakia 4:5, ary ny asa ataon'i Jaona Mpanao Batisa. Ao amin'io ampahany amin'ny Soratra Masina io Jesosy dia mampiseho ny endriky ny asa ataon’ilay Elia izay ho avy ary hampody ny zavatra rehetra. Ary nampiseho an’ i Jaona Mpanao-batisa ho toy ilay Elia mialoha ny fiavian 'i Kristy izy.
Jaona Mpanao Batisa dia tena lehilahy nanana ny fanahin'i Elia, nialoha ny fiavian'ny Tompo Kristy Jesosy. Fa TSY izy "ilay Elia" hampody ny zavatra rehetra. Kanefa ny tena mpivavaka tamin’izany andro izany, dia ny mpanora-dalàna sy Fariseo, na dia nitady ny Mesia aza, dia tsy nahafantatra Azy, na ny mpialoha lalana Azy. Nohamafisin'i Jesosy fa izy ireo dia tsy nahalala, manambarany fa azon’Andriamanitra atao ny mandefa lehilahy mahery iray mba tsy ho tsikaritry ny olona na dia ny mpivavaka eto amin'izao tontolo izao aza. Fa raha ny i Jaona izany ny mpialoha lalana, dia tsy maintsy ilaina ny fomba ahafantarana azy hoe mpialoha lalana izy, raha tsy izany dia zava-poana ny nanirahan’Andriamanitra azy. Ny tsy fahafantarana ilay "mpialoha lalana" dia mitarika ho amin'ny tsy fahafantarana hoe IZA ary INONA no ialoavany lalana?. Na dia ao amin'ny seminera teolojika, dia nampianatra fa i Jaona no mpialoha lalana, fa ny antonin’ izany mpialoha lalana izany no tsy tao amin’ny nampianariny. Ny fepetra takian’ ny taona dia ny "mpialoha lalana iray" tonga "hanomana" ny olona mba hahazo ny zavatra nampanantenain'Andriamanitra.
Nadika avy ao amin'ny "Ny Asa ny Mpaminany."
tamin'ny alalan’i Pearry Green.
Vakio ny tantara feno ao ... Toko 1 - Ny Mpialoha Lalana (PDF)
Jaona, ilay mpaminany, niseho teto an-tany rehefa afaka efa-jato taona tsy nisy mpaminany... Ny famantarana momba azy rehefa afaka efa-jato dia niseho, izany fotoana kely lasa izany... Ankehitriny, raha ara-panahy ianao dia fantatrao izay tiako ambara. Andriamanitra anie hanokatra ny sainao. Hafiriana izay no lasa? Efa-jato taona izay ny Isiraely tsy nisy mpaminany. Ny fiangonana dia niolakolana tao, ary avy eo dia niakatra an-tsehatra Jaona. Jaona dia mpaminany, famantarana fa ny Mesia handeha hiteny hanaraka azy. Araho tsara aza, satria Malakia 3 nanao hoe: "Izaho haniraka ny irako eo anatrehako mba hanomana ny lalana, hanomana ny olona." Jereo Jaona. Tsy misy fitiavan-tena ao aminy. Izy tsy mba nila voninahitra. Lazain’izy ireo fa izy ny Mesia, nefa hoy izy: "Izaho tsy mendrika ny hamaha ny kirarony." Fa raha vao niseho i Jesosy, dia nanana famantarana izy: ny Andry Afo, ilay hazavana teo ambony lohany, tahaka ny voromailala nidina, nisy feo nanao hoe: "Ity no Zanako malalako, Izay sitrako dia sitrako."
Nadika avy Voice of a sign. (1964) William Branham.
Indro Izaho handefa an’i Elia ilay mpaminany ho aminareo alohan’ny ahatongavan’ilay andron’ny Tompo lehibe sady mampatahotra.
Ary izy dia hampitodika ny fon’ny ireo ray ho amin’ny zanaka, ary ny fon’ny zanaka ho amin’ireo rainy, fandrao tonga Aho ka hikapoka ny tany amin’ny ozona.
Malachi 4:5,6 KJV